‘पैसा खर्च गरेको उम्मेदवारले कुनैपनि विकास गर्न सक्दैन’ | Chhinchhin Khabar
‘पैसा खर्च गरेको उम्मेदवारले कुनैपनि विकास गर्न सक्दैन’
९ मंसिर २०७४, शनिबार २३:१५
कम्यूनिष्ट आन्दोलनबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका बेदप्रसाद आचार्य पछिल्लो समयसम्म आईपुग्दा नयाँ बैंकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाउँदै गरेको नयाँ शक्ति पार्टीमा सक्रिय छन् । विगतका विभिन्न आदोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाएका उनी सरल र सहज नेताका रुपमा चिनिन्छन् । भेरी अञ्चल अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर दुई वर्ष सम्म काम गरेका आचार्यले अस्पतालका थुप्रै कुरा सुधारका निम्ति काम पनि गरे । माओबादी केन्द्रबाट पुर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अलग भएपछि उनीसँगै नयाँ बैकल्पिक शक्ति निर्माणमा निस्केका आचार्य आसन्न प्रतिनिधी सभा निर्वाचनका लागी बाँके क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । यिनै उम्मेदवार आचार्यसँग गरिएको संवादः–
निर्वाचनको तयारी कस्तो छ ?
निर्वाचनको तयारी तिव्र गतिमा अघि बढाएका छौं । जनताका माँझमा गएका छौं । फरक शैलीमा तडक÷भडक नगरी आफूले विगतमा गरेको कार्यलाई जनता समक्ष याद दिलाउँदै जनताको घरदैलो पुगिरहेका छौं । मलाई के लाग्छ भने सांसद भनेको के हो र यसले के काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा जनतालाई जानकारी गराउँदै जानुपर्छ भन्ने मेरो ब्यक्तिगत विचार रहेको छ । जनतामाँझ पुग्दा उहाँहरुले मप्रति देखाएको चासो र मायाले झन् उर्जा मिलेको छ । मेहनती, राम्रो नेता चाहिएको बेला म उम्मेदवार भएकोमा शुभकामना पनि दिएका छन् । उहाँहरुको भनाई अनुसार बाँकेमा पार्टी भन्दा पनि ब्यक्तिलाई चुन्ने गरेकाले तपाई निश्चिन्त भएर अघि बढ्नुस् भन्ने जस्ता सुझाव पाइरहेको छु ।
मतदाताको अपेक्षा के छ ?
मतदाताहरुको अपेक्षा समग्र राजनीतिलाई पेशा वा ब्यवसाय बनाएको अवस्थामा राजनीतिलाई सेवा बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् जनताले । जनयूद्धका बेला देखिको संघर्षदेखि जनआन्दोलनपछिको राजनीति सम्म मैले गरेका कामलाई जनताले मुल्यांकन गरि सम्झिरहेका छन् । नेता होस् त बेदप्रकाश आचार्य जस्तो होस् भन्दै भन्नुहुन्छ उहाँहरु । ईमान्दार, कर्तब्यनिष्ठ र जुझारु नेतालाई जिताएको खण्डमा समाजमा परिर्वतन हुन्छ, विकास हुन्छ र हामी जनताको राज्यमा सहज उपस्थिती हुन्छ भन्ने उहाँहरुको सोँच छ । यसकाकारण वेदप्रकाशलाई जिताउनै पर्छ भन्ने कुरा उहाँहरुबाट आइरहेको छ ।
तपाईको उम्मेदवारी खास के का लागी हो ?
जबसम्म मानव समाज रहन्छ, तबसम्म पृथ्वी रहन्छ र संर्घषका पाटाहरु सकिदैन । नेपालको सन्र्दभमा भारत र चिन स्वतन्त्र भइरहँदा जहानिया राणा शासनबाट पनि हामी मुक्त भएका थियौं । त्यसताका देखि हालसम्म भारत र चीनको विकासलाई हेर्ने हो भने हाम्रो स्थिती कहाँ छ, सबैले मुल्यांकन गरिहेका छन् । राजनीतिक आन्दोलन भन्दा पनि कसरी देश विकास गर्न सकिन्छ, देशालाई कसरी द्रुत गतीमा अगाडी बढाई आर्थिक विकास गर्ने भन्ने योजनासहित बाबुराम भट्टराई जीको पाँचवटा योजनासहित हामी जनताको घर–घरमा गइरहेका छौं । त्यही अनुरुप आफ्नो उम्मेदवारी दिएका छौं कि अब यो देशलाई विकास गर्ने दिशामा अघि बढ्छौं । हाम्रा एजेण्डा भनेकै मुलुक कसरी समृद्ध हुन्छ र कुन दिशाबाट हिड्दा समृद्धमा पुग्छौं, भन्ने एजेण्डा लागु गराउनका लागी मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
तपाईले राखेका मुख्य एजेण्डा के-के हुन् ?
यो क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विभिन्न धारबाट कार्य गर्नेछु । मेरो उम्मेदवारी भनेको समग्र जनताको र देशको सेवा गर्नका लागि हो । म जनताको साथ छोड्ने छैन, सधै सेवक बन्नेछु । बाँके जिल्ला नयाँ मुलुक हो । यहाँका वास्तविक पुराना जनतासामु नागरिकताको समस्या छ । ती सबै जनतालाई नागरिकता प्रदान गरि व्यवस्थित गर्ने योजनामा छु । नेपालगन्जका विभिन्न स्थानमा रहेको एैलानी जग्गामा गैरसुकुम्बासी बसिरहेकाले गैरसुकुम्बासीलाई अन्यत्र ब्यवस्थापन गर्ने, भेरी अञ्चल अस्पताललाई सरकारी मेडिकल कलेज बनाउने । हरेक वर्ष राप्तीमा आउने बाढी र डुबानलाई नियन्त्रण गर्न सिक्टादेखि सीमासम्मको क्षेत्रमा दुबैतर्फ कम्तिमा २० मिटर ग्रीन बेल्ड निमार्ण गर्ने, डुवान क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरि शहरको निर्माण गर्ने, डुवानक्षेत्र प्रभावित जनतालाई सुरक्षित बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने । प्रत्येक क्षेत्रमा पिच सडक निर्माण, नेपालगन्ज पुरानो सहर भएकाले यहाँको मुख्य समस्या मध्ये एक फोहोरलाई ब्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको छ ।
उम्मेदवारले चुनावका बेला जनतालाई आशा देखाउने त्यसपछि बिर्सने गर्छन् भन्ने आरोप छ नि ?
हो अधिकांस उम्मेदवारले विभिन्न आशा देखाउने र सत्तामा पुगिसकेपछि बिर्सने गर्छन् । यो समस्या छ । राजनीतिलाई जसले पेशा वा ब्यवसाय बनाई चुनावमा लाखौं खर्च गरेर तडक/भडक गर्नेले गर्दा यो समस्या आएको हो । एक सयमा ९४ जना राजनीतिक आर्थिकका रुपमा ईमान्दार छैनन् । उनीहरुले राजनीतीलाई पेशा वा ब्यवसाय बनाएका छन् । तर, म त्यो गर्दिन् । मैले सम्पादन गरेको कामलाई नै मुल्यांकन गर्ने हो, भने त्यस्तो पाउनुहुने छैन । बेदप्रकाश केवल काम गर्ने र जनताका माँझमा रहने नेता हो । मतदाताले विश्वास गर्नुहुन्छ । यो क्षेत्रमा गरेको काम, मेहनत र जनतालाई गरेको सेवा यी तीन कुराले नै म बेईमान छैन भन्ने कुरामा आम मतदाता बिश्वस्त छन् ।
चुनावका लागी अरु उम्मेदवारले पैसा खर्चिरहेका छन्, उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जित्न कत्तिको सहज छ ?
नेपालगन्ज क्षेत्र नम्बर २ का मतदाताहरु पैसामा बिक्नुहुदैन । तडक/भडकमा फस्नुहुदैन । यो कुरामा विश्वस्त रहनुस् । उहाँहरुले कामलाई हेर्नुहुन्छ । कुनै उम्मेदवारले लाखौं, करोडौं खर्चेर चुनाब लड्छ, भने त्यसले जनताको काम कुनैपनि हालतमा गर्दैन । पैसा खर्चेर चुनावमा उनीहरुले काम गर्दैनन् । उसले खर्च गरेको पैसा उठाउने हो । यो कुरामा विश्वस्त रहनुहोस् । पैसा खर्च गरेर अगाडी बढेको उम्मेदवारले कुनैपनि हालतमा आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न सक्दैन यसमा म डटेर अगाडी बढ्न सक्छु, जोसँग पनि म बहस गर्न सक्छु । आफ्नो स्वार्थ पुर्तिका लागि काम गर्छ । अब्यवस्थित र अप्ठ्यारो तरिकाले पैसा कमाएको छ, भने त्यो राजनीतिक लिडरले कमाएको छ । त्यसले जतिसुकै ठूला कुरा गरेपनि काम गर्न सक्दैन । त्यसले नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्छ ।
तपाईको प्रतिस्प्रर्धी दल/उम्मेदवार को हो ?
जनताका माझ जाने भनेको राजनीतिक एजेण्डा लिएर हो । अहिले हाम्रो पार्टीको थुप्रै एजेण्डाहरु अन्य दल तथा उम्मेदवारले पनि चोरी (नक्कल) गरिरहेका छन् । म स्पष्ट भन्नसक्छु मेरो प्रतिष्प्रर्धी कुनैपनि दल छैन । सबैभन्दा सिनियर छु । एक नम्बरमा छु । मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण नै हो कसरी देश विकास गर्न सकिन्छ । मैले बोकेको एजेण्डाहरु मतादाताले बुझ्नु भएको छ । मैले दिएको उम्मेदवारीमा प्रतिस्प्रर्धा गर्ने कोही पनि छैन । सबभन्दा अग्र पंक्तिमा छु ।
अन्त्यमा, आम मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
म तपाईहरुको साथ रहेनछु । जनताको हितका लागी सधै कटिवद्ध भएर लाग्नेछु । मतदातले आफ्नो मतको सदुपयोग गरि मलाई मतदान गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । मेरो चुनाव चिन्ह आँखामा मतदान गर्न सबैलाई मेरो अपिल छ ।
Previous articleजन्मदिनको अवसरमा दृष्टिविहिनलाई पत्रकार करुणाको सहयोग
Next article३२ जिल्लामा निर्वाचन जारी, उत्साहपूर्ण सहभागिता
‘अहिले फुट्ने नभइ जुट्ने समय हो’
‘स्वास्थ्यकर्मी २४ सैं घण्टा परिचालित छन्’
कोरोना संक्रमण र नेपालगन्जको कालोबजारी
महिलाको कथा सुन्ने धैर्य छैन !
कम जोखिम भएका ठाउँमा पसल खुल्ने, सर्तको अधिनमा रहने गरी सवारीसाधन...
हिन्दू राष्ट्र माग गर्दै निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा झडप
जग्गा प्लटिङमा कडाइ, जथाभावी कित्ताकाटमा रोक